Fanatanjahan-tena amin'ny atidoha - ary momba an'i Doug | Martech Zone
Talata, Septambra 12, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra momba ny tranonkala dia ny fiampitana ny tsipika misy eo amin'ny zavakanto sy ny fandaharana. Tamin'ny taona nianarako tao amin'ny lisea dia mpanakanto nafana fo aho… nanao sary foana tany ho any. Tamin'ny taonako nahatratra taona dia nianatra taranja oniversite sasantsasany amin'ny Drafting Indostrialy aho. Ny fandrafetana dia naka kely ny fahalalahana tamin'ny pensilihazo, saingy tena nankafiziko ny famolavolana ny famolavolana. Nijaly ny kilasy aho fa tsy nandray izany mihitsy tany amin'ny oniversite.
Nanatevin-daharana ny tafika an-dranomasina aho ary lasa Elektrisianina. Ireo olona marobe dia gaga fa ny lasa taloha dia nitaona ahy ho amin'ny Marketing, Database Marketing, Web Design, ary ny lozisialy Application Web… saingy fivoarana voajanahary izany. Ny lojika sy ny fifehezana takiana amin'ny fiarahana miasa amin'ny milina elektrika sy elektronika dia nanome ahy lozika tsara sy traikefa momba ny olana. Izany dia nitarika ahy tany amin'ny oniversite ho an'ny Teknolojia Elektronika. Tamin'izany fotoana izany dia nanomboka namaha olana sy namolavola programa lozika tohatra tao amin'ny PLC (Programmable Logic Controllers) aho. Izany dia nitarika ny fampidirana PC, Fandaharana, fampidirana tamba-jotra, ary fampidirana databata.
Tena tiako ny teknolojia sy ny indostria niarahako… ny Gazety Gazety. Te hiala eo amin'ny sehatry ny Production amin'ny orinasa ka hatrany amin'ny lafiny Marketing sy Advertising amin'ny raharaham-barotra aho… fa raha vao misy mahita anao manao fanamiana manga dia sarotra ny mahazo asa Marketing. Ka… nameno ny soavaly sy ny sarety aho ary nifindra tany Andrefana ny zanako, niasa tao amin'ny orinasa Database Marketing izay namolavola, nanangana ary nampihatra ny Marketing Data Warehouse nanerana ny Indostrian'ny Gazety. Asa mahavariana izany. Niara-niasa tamin'ny gazety sasany lehibe indrindra koa aho ary namolavola fampiharana manokana tao amin'ilay orinasa.
Nifikitra tamin'ny indostria nandritra ny folo taona mahery aho ary nanao tsara ho an'ny tenako. Izaho aza voatendry tao amin'ny indostria ho iray amin'ireo 20 voalohany eo ambanin'ny 40. Nanoratra ho an'ny vanim-potoana fanaovana indostrialy maro aho ary nametraka ny traikefako, nanangana tetik'asa Marketing Database Marketing miavaka ho an'ny gazety eo an-toerana. Ny fiovana teo amin'ny fitantanana teo dia tsy dia nanasongadina loatra ny resaka marketing amin'ny tahiry. Ny gazety dia natelin'ny orinasa goavambe tao anatin'ny folo taona, ka ny talenta mpandraharaha dia tsy zavatra azonao ampiasana amin'ny taratasy eo an-toerana. Nanapa-kevitra ny handao ny gazety aho sy ny orinasa taty aoriana. Fihetsika henjana io. Soa ihany fa nahazo fanerena kely teo am-pivoahana aho. 🙂
Ny taona manaraka dia nandany vola tamin'ny fanampiana ireo orinasa hafa hanangana ny programan'izy ireo ary taty aoriana aho dia nahazo gig miaraka aminy ExactTarget. Orinasa mahafinaritra izy io, iray amin'ireo orinasa tsy miankina haingana indrindra any Etazonia. Manana vokatra tena tsara izy ireo ary fanamby aho amin'izao fotoana izao hanohy hanatsara azy.
Indraindray tsy ampy anefa izany. Mbola faly aho manampy ny The Indianapolis Colts, ny Chambre du Commerce Indianapolis, mampiantrano sy mamolavola tranokala ho an'ny namana sy mpiara-miasa, mandray anjara amin'ny hetsika Marketing any amin'ny faritra, ary miatrika fanamby vaovao. Nanampy tamin'ny fandefasana aho I Indy no safidiko!, tranonkala fakana bozaka ahafahan'ny olona miteny ny antony hisafidianany Indianapolis. Tranokala mahazo vahana izy io. Izaho koa dia miasa amin'ny fandefasana ny orinasako manokana, Compendium Software, miaraka amin'ny mpiara-miasa iray hafa izay ametrahako ny bilaogiko, ny teknolojia ary ny traikefa momba ny marketing. Tiako ny miasa amin'ny hafainganam-pandeha haingana sy tezitra ary tiako ny miara-miasa amin'ireo olona manana toe-tsaina 'mahavita'.
Tiako ny mampiasa ny 'atidohako ankavia' ary manangana sary amin'ny fampiasana Photoshop sy Illustrator. Mila famoronana kely. Androany alina, niasa tamin'ny sary famantarana ho an'ny tarika iray eo an-toerana aho, Rok Hollywood. Nandefa izany tany amin'izy ireo aho, adiny iray lasa izay. Mety hamerina azy io imbetsaka aho noho ny hevitr'izy ireo… fa araka ny hitanao dia faly aho:
Ny farany dia 38 taona aho ary tsy fantatro izay tiako hahatongavana rehefa lehibe aho! Fantatro fa tena mahay mitady vahaolana ara-teknika amin'ny olana sarotra be aho, ary manabe ny olona amin'izany. Manana faniriana marina amin'ny teknolojia aho. Tsy manam-paharetana amin'ireo olona manao fialantsiny aho, saingy tiako ny manampy olona mangataka fanampiana. Tsy misy zavatra mahafa-po ahy mihoatra ny tsiky amin'ny tavan'ny mpanjifa.
Mpanjakan'ny Varotra rehetra aho (niova avy amin'ny Jack) saingy mbola tompon'ny tsy misy. Tsy zakako ny manao politika, indrindra amin'ny birao. Tsy tiako ny miasa amin'ny zavatra tsy manana tanjona azo isaina. Halako ny fivoriana izay hihaonantsika nefa tsy misy tanjona (taraiky tampoka aho ary mitondra ny PDA hahafahako manao mailaka). Tiako ny miasa tara… ny fotoana mamokatra indrindra ataoko dia eo anelanelan'ny 10PM sy sasakalina. Ary tiako ny mamaky snooze 20 maraina.
Izany rehetra izany ary Dada tokan-tena aho! Ny fotoana miaraka amin'ny zanako dia mahafinaritra. Mbola mahita sarimihetsika ihany isika rehefa afaka ary miara-miasa matetika. Samy tsy mampino ny zanako roa. Oh, manantena ny 'daty fisotroana kafe' voalohany aho mandritra ny fotoana fohy amin'ity faran'ny herinandro ity… izany dia ampahany amin'ny atidohako izay tsy nampiasaiko nandritra ny fotoana fohy, ka mirary soa aho!
Ampy ahy! Fotoana hatoriana.
Sep 13, 2006 ao amin'ny 5: PM PM
Dada tokan-tena aho tamin'ny ankamaroan'ny fahazazako zazalahy. Izay no ampahany ratsy indrindra tamin'ny fisaraham-panambadiana - tsy fahitana ny zanako lahy nandritra ny fotoana ela. Efa lehibe daholo izy ireo izao, ary kely aza ny fahitako azy ireo. Ankafizo ny fotoana.
Manana fotoana be dia be amin'izy ireo aho, Sterling. Izaho dia miambina ny ankizy. Ny iray amin'ireo antony nisafidianako ny afovoany andrefana dia ny mba hahitan'izy ireo bebe kokoa ny Renin'izy ireo, izay manambady sy mipetraka any Louisville. Tsy azoko antoka hoe inona no ho nataoko raha tsy nisy azy ireo!
Manaiky aho re: Fisaraham-panambadiana. Mahatsiravina izany ho an'ny olona rehetra tafiditra.